२०२० को लागि अज्ञात लेखकहरू द्वारा शीर्ष Qu०० उद्धरणहरू - उद्धरण पीडिया
कहिलेकाँही हामी कम महसुस गर्छौं कि हामी असफलतालाई हामी असफल हुनुभन्दा पहिले स्वीकार गर्दछौं। यस्तो अवस्थामा, यो हामी महत्त्वपूर्ण छ आफूलाई प्रेरित राख्नुहोस् र हाम्रा सबै हिम्मतका साथ सबै कठिनाइहरू पार गर्न प्रयास गर्नुहोस्।
जीवनमा कुनै पनि कुरा असम्भव छैन। यो सबै डरको बारे हो जुन हामी भित्र लुकेको छ। जब हामी आफैंलाई विश्वास गर्न थाल्छौं र हाम्रो सम्भाव्यतामा विश्वास गर्छौं, हामी निश्चित रूपमा चीजहरू गर्छन र जित्छौं।
जीवन कहिल्यै गुलाबको ओछ्यान नै हुँदैन र कठिन समयहरू हाम्रो मार्गहरू पार गर्न निश्चित छन्, तर हामी कसरी ती परिस्थितिहरू लिन्छौं र तिनीहरूलाई जित्न कोसिस गर्छौं भन्ने बारे हामी सबैमा छ।
हामीले कुनै पनि अवसरले असफलता स्वीकार गर्नु हुँदैन। बरु हामीले आफ्नो क्षमतामा विश्वास राख्नुपर्दछ र हामी पछिल्लो पटक प्रयास गर्दा लजाउनु पर्दैन जब हामी अन्तिम प्रयासमा असफल भए पनि।
विफलता हामी आउँछ क्षण को लागी हामीले प्रयास गर्न रोकिन्छ। जबसम्म हामी हाम्रा कार्यहरूमा सहज हुन्छौं, तबसम्म हामी विफल भएको प्रत्येक पटक सिकिरहन्छौं, तर जब हामी खडा हुन अस्वीकार गर्छौं, यो वास्तविक असफलता हो जुन हामीले सामना गर्छौं।
त्यस्ता अवस्थाहरूमा, प्रेरणाका मात्र शब्दहरू जुन हामीलाई सार्न धेरैबाट आउँदछ अज्ञात लेखक जसले हामीलाई परीक्षणको साँचो सार महसुस गर्न मद्दत गर्दछ।
केहि अन्य अज्ञात उद्धरणहरू हामीलाई भन्दछ कि हामीले जहिले पनि आफूलाई कार्यहरूमा धकेल्नु पर्छ र हामीले आफैंले राख्नु भएको लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न कोशिस गर्नुपर्छ। यो बुझ्नको लागि महत्त्वपूर्ण छ कि यदि हामी बाहिर गएन र त्यसलाई प्राप्त गर्न कोशिस गर्दैनौं भने हाम्रा सबै सपनाहरू व्यर्थमा जान निश्चित छन्।
कसैले तपाईका लागि केहि गर्न गइरहेको छैन। यसैले, यो तपाईं बाहेक अरू कोही छैन जसले तपाईंको लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नेछ। साथै, तपाईंले यसलाई तुरून्त कार्यमा सेट गर्नुपर्छ।
त्यहाँ 'पछि' भनिने केहि पनि छैन किनकि यो प्रायः 'कहिल्यै' हुँदैन। यदि तपाइँसँग सेटल गर्न कुनै काम छ भने, तपाइँ अहिले नै यसो गर्न सुरु गर्नुपर्नेछ, किनकि उनीहरूसँग सम्झौता गर्न कुनै भोलि छैन।
जान्नुहोस् कि जीवन भन्दा ठूलो शिक्षक अरु कोही हुन सक्दैन। तपाईंले कहिले पनि सिक्ने काम रोक्नुहुन्न किनकि जीवनले सधैं तपाईंलाई अडिट प्रणालीमा राख्दछ, र यो तपाईंले निर्भर गर्नुहुन्छ कि तपाईंले ती पाठहरू कति राम्रो लिनुहुन्छ।
साथै, तपाईंले आफ्नो मार्गमा आउने अवरोधहरूको सट्टा आफ्नो लक्ष्यहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न सिक्नुपर्दछ। यदि तपाईं अवरोधहरूमा घूरिरहनुभयो भने, तपाईं आफ्नो ध्यान केन्द्रितबाट विचलित हुन निश्चित हुनुहुन्छ।
त्यसकारण, तपाई आफैले राख्नुभएको लक्ष्य हेर्दै जानुहोस्, र सफलता तपाईं मा आउन बाध्य छ!
विश्वास गर्नुहोस् कि कुनै पनि कुरा असम्भव छैन। - अज्ञात
विश्वास गर्नुहोस् जीवनमा कुनै पनि कुरा असम्भव छैन। हो, आज सफल भएका व्यक्तिहरू ... सम्म पुगे
तपाईं मात्र विफल जब तपाईं प्रयास गर्न रोक्नुभयो। - अज्ञात
कहिलेकाँही हामी आफैंलाई असफलता ठान्छौं र सोच्न थाल्छौं कि हामी ...
आफैंलाई पुश गर्नुहोस्, किनकि तपाईका लागि अरु कसैले गर्न सक्दैन। - अज्ञात
हामीलाई थाहा छ कि भावनात्मक लगाव एक सुन्दर चीज हो। कुनै व्यक्तिसँग जोड्नु भन्दा राम्रो अरू केही हुन सक्दैन।
कहिलेकाँही पछि कहिले पनि हुँदैन। अब यो गर्नुहोस्। - अज्ञात
धेरै जसो समयहरू, हामी मान गर्छौं कि हामीसँग धेरै समय छ। र त्यो कारणको लागि, हामी ...
कहिल्यै सिक्न रोक्नुहोस्, किनकि जीवनले कहिले पनि शिक्षण बन्द गर्दैन। - अज्ञात
तपाईले पाउनुहुने सब भन्दा ठूलो शिक्षक तपाईको जीवन हो! ज्ञान जहाँसुकै र जहाँसुकैबाट आउन सक्छ। हाम्रो ...
सफलताको कुञ्जी लक्ष्यहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नु हो, अवरोधहरू होइन। - अज्ञात
कहिलेकाँही जब हामी हाम्रो लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न को लागी प्रयास गर्दछौं, हामी धेरै मुद्दाहरूमा जानुपर्दछ। र ...
खुशी हृदयमा छ, परिस्थितिहरूमा होइन। - अज्ञात
धेरैजसो मानिसहरूलाई प्रायः अरुहरू खुशी छन् जस्तो लाग्छ। जब उनीहरूको सोशल मिडियामा स्क्रोल हुन्छ ...
मूर्ख चीजहरूलाई तपाईंको खुशी तोड्न नदिनुहोस्। - अज्ञात
जीवनमा, सबै कुरा तपाई जस्तो चाहानुहुन्न त्यसरी नै चालित हुँदैन। त्यहाँ केहि चीजहरू छन् ...
तपाईले पाउनु भन्दा कमको लागि कहिले पनि नउठाउनुहोस्। - अज्ञात
क्यारियर वा सम्बन्धको बारेमा कुरा गर्नुहोस्, तपाईले कहिल्यै पनी कुनै चीजको लागि समाधान गर्नु हुँदैन जुन तपाईं भन्दा कम मूल्यको छ…
कुनै कारण बिना नै मानिसहरुसंग राम्रो हुनुहोस्। - अज्ञात
कुनै कारण बिना नै मानिसहरु लाई राम्रो हुन को लागी, यो को लागी तपाइँ तपाइँको पहिचान को रूप मा प्रकट गर्नुहुन्छ। तपाईंले सधैं ...
आशा नगुमाउनुहोस्। तिमीलाई थाहा छैन भोलि के हुन्छ। - अज्ञात
कहिले पनि आशा नबिर्सनुहोस् तपाईलाई कहिले थाहा छैन कि भोलि तपाईको लागि यो बाकसमा के भयो। यदि केहि…
आफैलाई प्रमाणित गर्नुहोस्, अरूलाई होइन। - अज्ञात
महान चीजहरू कहिल्यै आराम क्षेत्रबाट आउँदैनन्। - अज्ञात
हामीलाई थाहा छ कि आराम हाम्रो जीवनको एक महत्त्वपूर्ण भाग हो। यदि तपाईं हुनुहुन्न भने ...
खुशी हुनुहोस्, किनभने सबै कुरा राम्रो छैन, तर किनभने तपाई सबै कुरामा राम्रो देख्न सक्नुहुन्छ। - अज्ञात
तपाईं आफ्नो चीजहरूलाई तपाईंको वरिपरि राम्रा बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने सोचमा खुशी हुनुहोस्। यो सबै को बारे मा छ ...
यो गाह्रो हुन गइरहेको छ, तर कडा असम्भवको मतलब छैन। - अज्ञात
खैर, हामी सबै हाम्रो जीवनमा आदर्श वाक्यको साथ बाँचिरहेका छौं। हामी सबैको सपना फरक हुन्छ ...
साँचो मित्रहरू जीवनको लागि साथी हुन्। - अज्ञात
साथीहरु एक मानव आफ्नो जीवनकालमा पाउन सक्ने सबैभन्दा ठूलो उपहार। भएको एकको शक्ति ...
कठिन समयले हामीलाई मूल्यवान पाठ सिकाउँछ। - अज्ञात
हाम्रो जीवनमा समयहरू छन् जब हामी निराश हुन्छौं; हामी कम महसुस गर्छौं। हाम्रो समयमा ...
आफ्नो दृष्टिकोण बदल्नुहोस् र यसले तपाईंको जीवन परिवर्तन गर्दछ। - अज्ञात
तपाईंको असफलताको कारणका आधा कारणहरू तपाईंको जीवनप्रति तपाईंको दृष्टिकोणको कारण हो। तपाईंले परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ ...
साँचो प्रेम फेला परेन। यो निर्मित छ। - अज्ञात
यो बुझ्नु महत्वपूर्ण छ कि साँचो प्रेम फेला परेन। यो त्यस्तो चीज हो जुन तपाईंलाई निर्माण गर्न आवश्यक पर्दछ ...
प्रेम पूर्ण हुनु आवश्यक छैन। यो सिर्फ सत्य हुनु पर्छ। - अज्ञात
प्रेम सिद्ध हुन आवश्यक छैन; यो सिर्फ सत्य हुनु पर्छ। हो, त्यो ठीक भनिन्छ…
आफैंलाई सकारात्मक व्यक्तिले घेर्नुहोस्। - अज्ञात
आफैंलाई सकारात्मक व्यक्तिहरूसँग घेर्न महत्त्वपूर्ण छ किनकि यसले तपाईंलाई सकारात्मक सोच्न मद्दत गर्दछ।…
सकारात्मक सोचले तपाईका समस्याहरूलाई वेवास्ता गर्दैछ। तपाइँसँग उनीहरूसँग व्यवहार गर्ने क्षमतामा विश्वास छ। - अज्ञात
सकारात्मक सोचले तपाईका समस्याहरूलाई बेवास्ता गरिरहेको छैन, बरु तपाईको विश्वासलाई समातेर समात्नु भनेको ...
सपना देखा। यसलाई विश्वास गर्नुहोस्। निर्माण गर्नुहोस्। - अज्ञात
मानवको रूपमा, तपाईले स्वीकार्नु पर्ने पहिलो कुरा भनेको तपाईको सपना सीमित छैन ...
बलियो हुनुहोस् र जीवनमा मुस्कुराउनुहोस्, यद्यपि यसले कहिलेकाँही दुखाइ दिन्छ। - अज्ञात
जीवनमा सक्रिय र बलियो हुनु भनेको बाँच्ने उत्तम तरिकाहरू मध्ये एक हो। यदि तपाईं हुनुहुन्न भने ...
तपाईंको विगतलाई तपाईंको भविष्य मार्न नदिनुहोस्। - अज्ञात
हामी सबैको आफ्नै जीवन कथाहरू छन्। त्यहाँ कडा मेहनत को लागी यो बन्न लाग्यो ...
जब जीवन गाह्रो हुन्छ, आफैलाई बलियो हुन चुनौती दिनुहोस्। - अज्ञात
जीवन भनेको हरेक दिन अवरोध पार गर्ने बारेमा हो। यी अवरोधहरू अवरोध र चुनौती बाहेक केही होइन ...
आज तपाईलाई के दुख्ने छ भोलि तपाईलाई बलियो बनाउँदछ। - अज्ञात
तपाईको आराम क्षेत्र भित्र रहन तपाईले केहि कहिले पनि सिक्न सक्नुहुन्न। तपाईं मात्र जब सिक्न सक्नुहुन्छ ...